VaMerrick Garland Vanotambirwa neDare reSenate Kuva Muchuchisi Mukuru weAmerica
Kurume 11, 2021
Dare re Senate muAmerica rakatambira nezuro VaMerrick Garland kuti muchuchisi mukuru wenyika, kana kuti Attorney General, muhurumende yaVaJoe Biden.
Nhengo dzedare iri makumi manomwe dzakavhota dzichitsigira VaGarland, ukuwo nhengo makumi matatu dzikavhota dzichipikisa.
VaGarland, avo vanga vari mutongi wedare repamusoro, vakambodomwa nevaimbova mutungamiri weAmerica, VaBarrack Obama, kuti vave mutongi wedare repamusoro soro, reSupreme Court, asi maseneta ebato reRepublican Party akaramba kuvatsigira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaKennedy Masiye, avo vanogara mudunhu reTexas, muAmerica, vanoti vanofara zvikuru sezvo VaGarland vari kuuya neruzivo rwakawanda kubasa ravo idzva.
VaMasiye vanoti zvematongerwo enyika zvanga zvapinda zvakanyanya munyaya dzezvemitemo muAmerica zvinove zvinhu zvakagara zvisingafarirwi naVaGarland.
VaMasiye vanoti vanotarisira kuti VaGarland vachaita kuti bazi rezvemitemo, reDepartment of Justice, riite basa raro pasina zvematongerwo enyika mukati.
Hurukuro naVaKennedy Masiye
Mitemo Inowomesera Vanhu kuVhota Inodzikwa muDunhu reTexas
Gavhuna vedunhu reTexas, VaGreg Abbott
Gavhuna vedunhu reTexas muAmerica, VaGreg Abbott, vasaina bhiri rezvekuvhota, rinonzi SB 1, vachiti kuvhota kwava kuzoitwa zvakanaka mudunhu reTexas pamusoro pebhiri iri.
Bhiri iri, iro rinodiwa nevatsigiri vebato reRepublican Party, richawomesera vanhu vazhinji pakuvhota.
Bhiri iri rinorambidza kuti munhu avhote ari mumotikari, izvo zvanga zvichirerutsira vanhu kwemakore mazhinji.
Bhiri iri, rinorambidzavo kuti pave nenzvimbo dzekuvhotera dzisingavharwi husiku nemasikati.
Vanoshora bhiri iri vanoti rinokonzera kuti vanhu vazhinji vatadze kuvhota, zvikuru sei vasiri vechichena.
Matunhu eAmerica gumi nemasere anotongwa nemagavhuna eRepublican Party ari pakati pekunyora nekudzika mitemo inowomesera vanhu veAmerica vanoda kuvhota, izvi zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda mudunhu reTexas iri, VaKennedy Masiye, vanoti vanhu vazhinji havasi kufara pamusoro pebhiri iri, kunze kwevatsigiri vebato reRepublican party.Vanotivo masangano mazhinji atozivisa kuti arikuenda kumatare edzimhosva kunoedza kumisa mutemo uyu.
VaMasiye vanoti mitemo iri mubhiri iri ichatanga kushanda mushure memwedzi mitanhatu kana bhiri iri rikasamiswa nematare edzimhosva.
Nyamavhuvhu 24, 2021
Pfizer Inopiwa Rezenisi Rizere reNhomba yeCovid-19 Yainogadzira
Mushonga wenhomba yeCovid-19 unogadzirwa nePfizer
Bazi rinoona nezvekushandiswa kwemishonga, reFood And Drug Administration, rakapa neChipiri kambani yePfizer mvumo izere yekushandiswa kwemushonga wayo wenhomba yeCovid-19.
Mushonga uyu ndiwo mushonga wenhomba yeCovid-19 wekutanga kuongororwa nekupiwa rezenisi rekuti ushandiswe pavanhu.
Mushonga uyu wave nenguva uchishandiswa pavanhu pasi pose mushure mekupiwa mvumo yechimbichimbi yekuti ushandiswe kubva kutanga kwaZvita gore rapfuura.
Rezenisi rakapiwa Pfizer richaita kuti zvive nyore kuti vashandirwi, mauto nezvikoro zvepamusoro zvidzike mirairo yekuti vanhu, vashandi nevadzidzi vavo vatange vabaiwa nhomba yeCovis-19 vasati vapinda munzvimbo dzemakambani kana zvikoro izvi.
Rezenisi iri rinotarisirwawo kubatsira mukupa chido chekubayiwa nhomba kuvanhu vanga vachizeza kubyaiwa nhomba yeCovid-19 sezvo hurumende yataura kuti yakaongorra mushonga uyu ikagutsikana nawo.
Kubva muna Zvita wegore rakapfuura, mushonga uyu wanga uchishandiswa pasi pemvumo yechimbichimbi.
Nyanzvi mune zvehutano, Doctor Frenk Guni, vaudza Studio 7 kuti nhomba yePfizer ndiyo iri kunyanya kushandiswa nevanhu kupfuura imwe yose, vachiti pari zvino mushonga uyu washandiswa nevanhu vanoita zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vari kubayiwa nhomba yeCovid-19.
Kusvika musi weSvondo yapfuura iyi, vanhu vakuru muAmerica vanoita zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana (73%) vanga vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga.
Hurukuro naDoctor Frenk Guni
Nyamavhuvhu 23, 2021
VaBiden Vanoti Hapana Chizvarwa cheAmerica Chichasiyiwa MuAfghanistan
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, vanoti pane hurukuro dziri kuitwa dzekuti mauto eAmerica arambe ari muAfghanistan kupfuura zuva rakanga ratarwa.
Mauto eAmerica ose anofanirwa kubuda munyika iyi nemusi wa 31 Nyamavhuvhu asi VaBiden vanoti pari kuitwa hurukuro dzekuti mauto aya amboramba ari munyika iyi kuti abatsire mukuburitswa kwezvizvarwa zveAmerica nezvimwe zvenyika iyi zvinoda kuenda muhupoteri.
VaBiden vanotivo kana paine chizvarwa cheAmerica chichiri muAfghanistan, mauto eAmerica acharamba ari munyika iyi kusvika zvizvarwa zveAmerica zvose zvabuditswa.
Vativo zvizvarwa zveAfghanistan zviri kuendeswa kumabhesi emauto eAmerica zvichatanga zvaferefetwa zvakasimba zvisati zvabvumidzwa kuva vapoteri muAmerica.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo dzepamusoro paHoward University, muWashington D.C., VaCalvin Manduna, vanoti nyaya iyi haina kubatwa zvakanaka, izvo zvavakukonzera kuti vanhu vatange kushora VaBiden vanga vachimborumbidzwa kubva zvavakatora mhiko yekutungamiri America.
Hurukuro naVaCalvin Manduna